Messi Oo Soo Muuqday Iyo Ronaldo Oo Boos Ka Waayay Shaxda Ilaa Haatan Ugu Fiican Yurub. - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxa la ciyaaray in ka badan kala badh kulamdii xilli ciyaareedka waxaana ilaa haatan la magacaabin koox keli ah oo ku guulaysatay horyaal ka mid ah horyaalada yurub balse taas bedelkeeda waxa jira kooxo qaar kuwaas aad loogu saadaalinayo in ay ku guulaysan doonaaan horyaaladooda.
Koxda Chelsea ayaa aad ugu cadcad in ay sannadkaan ku guulaysato Premier League si lamid ah Juventus oo iyana iskaga baashaalaysa Scudetto balse waxaan weli la saadaalin karin horyaalada kale ee qaarada yurub maadama fooda la isku wada hayo.
Edinson Cavani Marseille PSG Ligue 1 26022017
Barcelona yaa farqi hal dhiibic ah hogaanka uga hatysa kooda Real Madrid oo kulan baqi u yahay sidoo kale Bayern iyo Monaco ayaa min shan dhibcood ka sareeyay kooxda RB Leipzig iyo PSG waxaana ay dhamaan kooxahaasi ay u sharaxan yihiin in ay horyaaladooda ku guulaystaan.
Dhanka kale waxa jira xiddigo qaab ciyaareed wanaagsan kusoo jiray tan iyo bilowgii xilli ciyaaredkaan kuwaas oo kooxohooda ka caawinayey guulaheeda halka mar kalena ay u maciinayeen isla markaana ay guuladarrooyin ka badbaadinayeen.
Shabakada Goal ayaa soo saartay shaxda 11-ka ciyaartoy ee ilaa haatan ugu fiican qaarada yurub iyadoona ku salaysay qaab ciyaareedkooda iyo bandhigoodi aadka u fiicnaa kaas oo ay soo ururisay shebeked xiddigaha qiimeysa ee Opta.
Premier League, La Liga iyo League 1 ayaa noqday horyaalada nasiibka u yeeshay in ay xiddigaheedu soo buuxiyaan shaxdaan iyadoona ay boos ka waayeen gebi ahaanba horyaalada kaelkale ee yurub o ay u horeeyaan Serie A iyi Bundesliga.
Shaxdaan ayay hogaaminayaan xiddigaha weerarka uga ciyaara ee Alex Sanchez [17 gool iyo 8 caawin] Edinson Cavani [36 gool 35 kulan] iyo Numberka tobnaad ee kooxda Barcelona ee Leo Messi kaas oo loo diiwaan geliyay 21 gool 7 caawin.
Halkaan ka eeg shaxda oo dhamays tiran.